घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू अल्जेरियन फुटबल खेलाडीहरू Benrahma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू भने
हाम्रो सैद बेनरहमा जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा हामी तपाईलाई अल्जेरियाको पूर्ण जीवन कथा प्रस्तुत गर्दछौं। यो आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेक्न यहाँ सैद बेनरहमाको बायोको सारांश छ - यसले कथा बताउँदैन।
जस्तै गार्डियनले यसलाई राख्छ, फुटबलरले एक मत्स्यांगना जायफल गर्न सक्दछ। हो, यो सत्य हो। तपाइँ र म ब्यानरहमालाई उसको खेल निर्माण कौशलको लागि जान्दछौं। तथापि, पछि वेस्ट ह्यामले ब्रेन्टफोर्डबाट अल्जेरिया विन्गरमा हस्ताक्षर गरे, उनको जीवनको कथा थाहा पाउनको लागि क्वेस्ट बढेको छ। चिन्ता नगरिकन, हामी यहाँ छौं उसको सम्झना भ break्ग गर्न। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Benrahma बचपन कहानी भन्यो:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम राख्नुहुन्छ 'अल्जेरियन मेसी'। मोहम्मद सैद बेन्रह्माको जन्म अगस्त १ 10 1995 of को १० औं दिनमा (अब २ 25 बर्ष र months महिनाको उमेर) अल्जेरियाको एउटा शहर आइन टेमोचेन्टमा उनको आमा-बुबामा भएको थियो। अल्जेरियन आफ्नो आमा र दिवंगत बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका असंख्य बच्चाहरू मध्ये एक हो।
सानो बच्चाको रूपमा, सैद प्राय जसो आफ्ना बाल्यावस्थाका साथीहरूसँग सडक फुटबल खेल्ने कुरामा भाग लिन्थ्यो। अवश्य पनि, त्यस पुस्ताका अल्जेरियनहरू उनीहरूको फुटबल प्रति प्रेमको लागि चिनिन्थे। यदि तपाईं सचेत हुनुहुन्न भने, तिनीहरू मध्ये धेरैले जुन हर्ष पाएका थिए Zinedine Zidane - एक कथा जो उत्तर अफ्रिकी देशबाट आफ्नो पुर्खाहरु छ।
Benrahma परिवार पृष्ठभूमि कहा:
भविष्यको AFCON स्टार सिडी बेल Abbes मा हुर्काइएको थियो - एक धनी परिवार मा। सैद बेन्रह्माका अभिभावक आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई फ्रान्समा प्रायोजित गर्न पर्याप्त धनी थिए सैद सहित उनी ११ वर्षको हुँदा। Yacine Aldi (अल्जेरियन मूलका सँगी भाई), बेन्रहमाले किशोरावस्थामा फ्रान्समा जीवन शुरू गरे।
कुनै श doubt्का छैन, तपाईं सम्भवतः अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ एक इस्लामिक परिवार पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। जसरी संस्कृतिले उसको पालनपोषणको क्रममा माग गर्दछ, फुटबलरका बुवा र आमाले उनीमा लगाए, एक सच्चा मुसलमानको नैतिकता।
Benrahma परिवार मूल:
हो, सबैले अनुमान गर्न सक्छन् ऊ उत्तर अफ्रिकाका हो। जे भए पनि थाहा नभएको अल्जेरिया बेन्रहमाको परिवारबाट आएको हो। सत्य यो हो कि उसको परिवारको जरा सीदी बेल एबेसबाट छ - जुन देशको उत्तर-पश्चिम भागमा अवस्थित छ। नक्शाबाट अवलोकन गरिए अनुसार, सैदको अल्जेरियाको गृहनगर मोरोक्को र स्पेनको धेरै नजिक छ।
थप रूपमा, यस फरवार्डको मूलसँग अल्जेरियन अरबी भाषा बोल्ने मानिसहरू समावेश गर्ने एक जातीय समूह छ। स्पष्टताको उद्देश्यका लागि, यहाँ एक नक्सा छ जसले तपाईंलाई समेटाउँदछ, बेन्रहमाको परिवार मूल।
बेनरहमा क्यारियर स्टोरीले भन्यो - यो सबै कसरी सुरु भयो:
उनको परिवार फ्रान्समा सर्नु अघि अल्जेरियाली मेस्सीको मनमा एक पेशेवर बन्ने थियो। एक बलियो आधारशिला राख्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सचेत भएकोले भने, बेन्रह्माका अभिभावकले उनका छोरा एनआरबी बेथिया (अल्जेरियामा अवस्थित) जब उनी9वर्षका थिए भर्ना गरे।
फ्रान्सको टुलूस, उनीहरूको आगमनमा, बिन्रह्मा फुटबलमा आफ्नो अनुभव अगाडि बढाउन बाल्मा एससीमा सामेल भए। आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गरिरहेको छैन भनेर देखेर जवान केटाले आफ्ना आमाबाबुको सल्लाह खोज्यो र चाँडै २०११ मा कोलमियर्समा बसाइँ सरे।
फ्रान्समा Benrahma प्रारम्भिक जीवन (क्यारियर) भने:
दुई वर्ष कडा प्रशिक्षण पछि, प्रतिभाशाली विger्गरले अधिक प्रतिस्पर्धी क्लबमा भाग लिन खोज्यो। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... यो बेन्रह्माका बहिनीहरू थिए जसले उहाँलाई नाइजीमा फ्रान्सेली प्रोफेशनल फुटबल क्लब ओजीसी नाइसमा सामेल हुने कुरामा विचार गर्न ईन्जिनियर गरे।
आफ्नो विगतको ट्र्याक रेकर्डको लागि धन्यवाद, बेन्रह्मा नाइसले २०१ 2013 मा स्वीकार्यो। लिग १ क्लबमा सम्मिलित हुन केहि मिनेटमा अल्जेरियन मेस्सीले आफ्नो प्रशिक्षण सत्रको समयमा तत्कालीन प्रबन्धक क्लाउड पुएललाई आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरे। तसर्थ, उसले २०१ professional मा नाइससँग आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गर्ने सुअवसर पायो।
प्रगतिशील गतिमा अघि बढ्दै, बेन्रहमाले आफ्नो सीप आफ्नो क्लबको लागि प्रयोगमा राखे जब उनी आरक्षित टोलीमा खेल्छन्। धन्यबाद, उहाँ र उनका आमाबुवाले आफ्नो क्यारियरको बाटोमा लिनुभएको जुवा अन्तमा यसको भुक्तानी भइरहेको थियो।
बेनरहमा रोडलाई फेम कथामा भनियो - throughण मार्फत उनका बाँकी रकम भुक्तान गर्दै:
हामी सबैलाई थाहा भएकै रूपमा, युवा क्लबका लागि ठूला क्लबहरूको लागि ग्यारेन्टी गरिएको पहिलो-टोली अवसर पाउने सम्भावित युवा खिलाडाहरूको लागि यो सजिलो हुँदैन। यो Benrahma को लागि भयो, र गरीब केटाले धेरै क्लब मा onण मा गएर आफ्नो बाँकी तिर्न।
दुर्भाग्यवश, धेरै speण मन्त्रहरूमा सामेल भएका धेरै क्लबहरू उनी सहभागी भएका सबै क्लबहरूले ग्रहण गरेका थिए। २०१ football मा फुटबलका भगवानले उसको पुकार सुने बेनरहमा आफूलाई ओजीसी नाइसबाट ब्रेन्टफोर्डमा सामेल भइरहेको देखे - जसले उसलाई पहिलो टीमको अवसर र सुरूवात गर्‍यो।
Benrahma सक्सेस स्टोरी - देश र क्लब:
ब्रेन्टफोर्डमा अतुलनीय फुटबल शक्ति प्रदर्शन गर्दा उसको देश (अल्जेरिया) उनीहरूको राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्न घुँडा टेक्न बाध्य भयो। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... भन्नुभयो जोसँग खेल्नेहरू मध्ये एक थियो रियाद मह्रेज - अल्जेरियालाई राष्ट्र २०१२ अफ्रिकी कप जित्न सहयोग गर्दै।
दुई बर्षको अन्तरिक्षमा, बेन्रह्माले ब्रेन्टफोर्डमा एक शानदार प्रदर्शनमा राख्छिन्। यो प्रभावशाली उपलब्धीले धेरै क्लबहरू उसको हस्ताक्षरको लागि घुँडा टेकिरहेको देखे। प्रशंसकहरू पनि छाडिएनन्। जसै भनिएको छ, 'नियमित रूपमा मानिसहरू मलाई उनीहरूको क्लबको लागि साइन इन गर्न अनुरोध गर्थे'यसले उनी कती माया गर्छ भनेर देखाउँदछ।
शीर्ष क्लबहरूमा यो थियो लीसेस्टर र न्यू कैसल जसले पहिले आफ्नो स्थानान्तरण लडाई शुरू गरे। दुःखको कुरा, यी शीर्ष क्लबहरूमध्ये कुनै पनि उहाँलाई लिन सकेन। शीर्ष teams टोलीहरू मनपर्दछ पछि आर्सेनल ट्रान्सफर लड़ाईमा लेसेस्टरमा सामेल भए। अझै, नानले अझै पनि सुपर अल्जेरियन प्राप्त गर्न सके।
अनुसन्धान जारी छ। यो एक कुरा भयो कि Benrama को हस्तान्तरण गाथा विभिन्न उपनाम जस्तै को लागी शुरू भयो; को बेनरहमा ड्रामा, जस मध्ये चेल्सी र लीडहरू युद्धमा गए (शिर देखि टाउको) उत्तर अफ्रिकी सुपरस्टार मा।
यति धेरै लडाई पछि, एक विजेता अन्तमा देखा पर्‍यो। यो वेस्ट ह्याम युनाइटेडको हो डेभिड मोयेस जसले अन्ततः सईदको मन जित्यो उनले अक्टोबर २०२० मा उनलाई हस्ताक्षर गर्दा।
लिभरपूल बिरूद्धको खेलमा आंशिक रूपमा ईपीएलमा डेब्यू गर्दा झलक दिइयो किन डेभिड मोइजले उनलाई उनको पूर्ण वेस्ट ह्याम डेब्यू सुम्पनु पर्छ पछि पूर्ण डेब्यूको लागि रोइ उसको समर्थकहरूबाट आउन सुरु भयो, धेरै जसो अल्जेरियालीहरू सोशल मिडिया ह्यान्डलहरू (मुख्य रूपमा फेसबुक) मार्फत। लामो-प्रतीक्षित समय अन्तमा आयो र उसले राम्रो गर्यो।
निस्सन्देह, बेन्रह्माका अभिभावक र ठूलो परिवारका सदस्यहरू उहाँ जत्तिकै सफल भएको प्रार्थना गरिरहेका छन् समीर नास्री EPL मा। तलको भिडियोले तपाईंलाई तपाईंको क्लबमा बेनरहमा भएको उनीहरूको टोलीमा इच्छा गराउनेछ। बाँकी, तिनीहरूले जहिले पनि भन्छन्, इतिहास हो।
Benrahma को प्रेमिका र पत्नी हुन को हुनुहुन्छ भनिएको छ?
एक सिद्धान्तको खेलाडीको रूपमा, अल्जेरियन मेस्सीले आफ्नो सम्बन्ध जीवन निजी राख्न यथासक्दो प्रयास गरेको छ। यद्यपि हामी यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि उनका केहि महिला प्रशंसकहरूले उनको प्रेमिका वा भावी पत्नी बन्ने सम्भावनामा कल्पना गरेका थिए - किनभने उहाँ सुन्दरतालाई बाध्य पार्नुहुन्न।
उहाँ ब्रह्मचारीको रूपमा जीवन बिताउन चाहनुहुन्न भन्ने थाहा पाउँदा हामी पक्का छौं कि उनको परिवारले उनलाई उनीहरूको जीवनको प्रेमको परिचय दिन प्रतिक्षा गरिरहेको छ। राम्ररी उनको प्रेम जीवन अनुसन्धान पछि, हामीले अन्तमा केहि भेट्टायौं - उनको प्रेमिका वा पत्नी हुन एक संकेत। हाम्रो टीमले एक भव्य महिलासँग बेनरहमाको तस्वीर फेला पारे। ठूलो प्रश्न हो; के उनी उसकी प्रेमिका वा मंगेतर हुन सक्छन?
Benrahma निजी जीवन भन्नुभयो:
आफ्नो क्यारियरको क्रममा, प्रशंसनीय अल्जेरियन खेलाडीले केहि गुणहरू प्रदर्शन गरेको छ जुन उनको व्यक्तित्वको सर्वश्रेष्ठ वर्णन गर्दछ। सत्य यो हो कि, Benrahma हास्य को एक ठूलो भावना मिल्यो छ। वास्तवमा, उसले मान्छे प्रहार गर्दछ जो लाइमलाइट खोज्दैन तर उसले फुटबललाई कुरा गरोस् भनेर रुचाउँछ।
अरू के छ? ... अरूलाई प्रेरित गर्ने उसको क्षमता र उसको आशावादीताको स्तरले उसलाई आफ्नो केहि टीमका साथीहरूको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। बोरडमलाई मार्ने तरीकाको रूपमा, बेन्रहमा प्राय: पौंडी खेल्न मनपराउँदछन्। कहिलेकाँही तनाव कम गर्न उनी पानीमा लामो हिंड लिन्छन्।
Benrahma जीवनशैली भने:
पहिलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण, त्यो फेसन मा एक ठूलो परीक्षा मिल्यो। कुनै श doubts्का छैन, भने Benrahma धेरै राम्रो ड्रेसर हो। धेरै समयपछि, इन्स्टाग्राममा उनका चित्रहरूले उहाँलाई एक त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरेको छ जुन उहाँ राम्रो लुगा लगाएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ।
Benrahma नेट वर्थ भने:
उसको वित्तको बारेमा अनुसन्धान गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि वेस्ट ह्याम युनाइटेडमा उसले ठूलो आम्दानी गर्दछ। आश्चर्यजनक, Benrahma जेब kets 1,083,219 को अनुमानित वार्षिक वेतन। उसको आयले यस नेट बायो लेख्दा उसको नेट वर्थ करीव २० लाख डलर राखेको छ।
स्पष्ट रूपमा, उनको वित्तीय कार्यवाहीले उनलाई एक विलासी घर र केही विदेशी कारहरू वहन गर्न सक्षम गरेको छ। यद्यपि उनीसँग सामाजिक मिडियामा आफ्नो सुन्दर सवारी flaunting मा कुनै समस्या छैन। नबिर्सनुहोस्, हामीले बेन्रहमाको घरको झलक शायद नै देख्यौं।
Benrahma परिवार जीवन भन्नुभयो:
आफ्नो जीवन कहानी को दौरान, अल्जेरियाई मेसी सधैं आफ्नो घरको समर्थनको मजा छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई परिवारका सदस्यहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौं, उनको बुवाबाट शुरू गरेर।
Benrahma बुबाको बारेमा:
धेरै अवसरहरूमा, प्रतिभाशाली विger्गरले आफ्नो लेट बाबालाई गर्व बनाउन सफलताको लागि प्रयासरत छ। दुर्भाग्यवस, जनवरी २०२० मा बेन्रह्माका बुबाले मृत्युको चिसो हातले आफ्नो जीवन गुमाए। दुर्भाग्यवश, सय्यदले आफ्नो मृत्युदण्डमा उनका बुबालाई भेट्न आउँदा आफ्नो आँखाबाट आँसु थाम्न सकेनन्।
Benrahma आमाको बारेमा:
हामी उनको पालनपोषणमा उनको आमाको भूमिकालाई बढावा दिन सक्दैनौं। जे भए पनि बेनरहमाले उनको आमाको नाम उल्लेख गरेनन्, उनले आफ्नो जीवनमा उनको विशेष स्थान रहेको देखाए। उनले प्रिमियर लिग क्लबमा सामेल हुँदासमेत उनलाई वेस्ट ह्याम स्टेडियममा ल्याए।
Benrahma भाई बहिनीहरू को बारे मा:
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि अल्जेरियन खेलाडीले अज्ञात बहिनीहरू पायो। अरू के छ? ... बेन्रह्माले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई 'भाई' भनेर बोलाउने बानी विकास गरेको छ। वास्तवमा, उहाँ र तिनका साथीहरू बच्चाहरूदेखि नै धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा, उनीहरूले सँधै आफ्नो तस्विरहरू इन्स्टाग्राममा साझेदारी गरेका छन्।
Benrahma नातेदारहरु बारे:
आफ्नो पुर्खामा बढ्दै, आफ्नो हजुरबुबा वा हजुरआमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन। जे होस्, हामी विश्वस्त छौं कि बेन्रह्मा काका र काकीहरू जहाँ उपलब्धि भए पनि उसको उपलब्धिमा गर्व गर्छन्।
Benrahma अनटोल्ड तथ्यहरु भने:
अल्जेरियाली मेस्सीको हाम्रो जीवन कथाको वरिपरि भेट्न, यहाँ केहि रोमाञ्चक वास्तविकताहरू छन् जुन तपाईंलाई उसको जीवनीको बोध लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: उसले लाखौं कमाउँछ जब तपाईं उसको वेतनमा गणना गर्नुहुन्छ अल्जेरियन दिनार:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनको £ २०,20,799। साप्ताहिक ज्यालाले सजीलै उसको आफ्नै देश अल्जेरियामा करोडपति बनाउँदछ। यदि तपाईंले उसको तलबलाई अल्जेरियन दिनारमा रूपान्तरण गर्नुभयो भने, उसले प्रति हप्ता करीव 3.5 XNUMX लाख DZD बनाउने थियो। बेन्रह्माले एक हप्तामा कमाएको कमाउन औसत अल्जेरियन नागरिकले डेढ वर्ष काम गर्नुपर्नेछ।
प्रति वर्ष £ 1,083,219
प्रति महिना £ 90,268
प्रति हप्ता £ 20,799
प्रति दिन £ 2,971
प्रति घण्टा £ 124
प्रति मिनेट £ 2.1
प्रति सेकेन्ड £ 0.03
हामीले रणनीतिक रूपमा सैद बेनरहमाको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटको रूपमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनुभएपछि तपाईंले आफैंलाई हेर्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो बेनरहमाको बायो भने, यो उसले कमाएको हो।
Population .98.2.२% मुस्लिम भएको मुलुकमा जन्मनु भनेको उसको इस्लाम अभ्यास गर्ने उच्च संभावना रहेको छ। अवश्य पनि, हाम्रो अनुमानहरू सही छन् किनकि बेन्रहमा उनको धार्मिक पोशाकमा लगाएको एक तस्वीर पोस्ट गर्नको लागि उनको इन्स्टाग्राममा गएको छ। निस्सन्देह, सैद बेन्रह्मा मुसलमान हुन लाज मान्दैनन्।
आफ्नो फुटबल विश्लेषण बाट, Benrahma भन्दा राम्रो dribbling क्षमता छ Yacine Adli। साथै, उहाँको चपलता र त्वरण असाधारण हो। तसर्थ, उसले चाँडो आधा प्रतिद्वन्द्वीहरु मा झुकाउन सक्छ र अझै बल कब्जा राख्न।
कुनै श doubt्का छैन, अल्जेरियन फुटबल खेलाडीहरू विदेशमा खेल्दा उनीहरूको देश गौरवान्वित भएको छ। एउटा मीठो कुरा हामी अवलोकन गर्छौं त्यो हो - यसका सबै फुटबलरहरू विश्वास गर्छन् तिनीहरू एक ठूलो परिवारबाट आएका छन्।
दुःखको कुरा, कसैलाई पनि बेन्रह्माका बाबुआमा - उनका दिवंगत बुबाले छोडेको शून्यता भर्न असम्भव हुने थियो। हाम्रो हार्दिक शुभकामना उसको परिवारसँग छ (विशेष गरी उनकी आमा र भाइबहिनीहरू)। हामीलाई आशा छ कि उनीहरू परिवारको टाउकोको मृत्युको कारण एक्लोपनाविना जीवन्त जीवन बिताउन पाउनेछन्।
हाम्रो Benrmama संक्षिप्त बायो पढ्न को लागी धन्यवाद। सधैं थाहा पाउनुहोस् कि Lifebogger ले तपाईको जिज्ञासालाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्दछ कानूनी बाल्यकालका कथाहरू र फुटबलरहरूको जीवनी तथ्यहरू। कृपया तल टिप्पणी अनुभागमा बेनरहमाको बारेमा तपाइँका विचारहरू हामीलाई साझा गर्नुहोस्।
पुरा नाम: मोहम्मदले भने Benrahma
निक नाम: अल्जेरियन मेसी
जन्म मिति: 10 अगस्ट 1995
उमेर: २ years बर्ष र months महिना
जन्मस्थान: ऐन टेमोचेन्ट, अल्जेरिया
वार्षिक वेतन: £ 1,083,219
नेट मूल्य: Million २ मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
उचाइ: 1.72 मीटर (5 फुट 8 मा)
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 10
गेरथ बेले बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 26
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 7
मर्कू अर्नाटोभिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य